About Us - Nantai andrana Equipment Co., Ltd
Tsindrona Pump solika ...
Common dalamby Tools
Common rail injector dingana 3 ...
CAT HEUI Mpamantatra
Iantrao Parts (CommonRail / CAT ...)
EUP / EUI fitiliana dabilio / Cam boaty
PT Cummins Pump sy ...
Mila mahay mandanjalanja turbo Machine
Nentim-paharazana milina paompy ...
Nentim-paharazana: Iantrao Parts
Taian Nantai andrana Equipment Co., Ltd., miorina ao Tianyuan Street Economic Development Zone Taian City Shandong Province PR Shina, no mitarika mpanamboatra manokana amin'ny famokarana ny Diesel Fuel tsindrona System Tester ao Shina, dia avaiable nentim-paharazana solika ho an'ny solika tsindrona paompy fitiliana dabilio , PT-ny komina paompy sy ny injectors Test jiro, EDC (Electronic Diesel Controler), CR (Common dalamby paompy Tester), Cri (Common dalamby injectors Tester), Nozzle Tester, ary maro Spares faritra paompy.
Ny Diesel solika tsindrona paompy mandany ny miova-Fotoana sy miova-haingana teknika, izay mizara efatra andian-dahatsoratra-12PSB andian-dahatsoratra, NT2000 andian-dahatsoratra, NT2001 andian-dahatsoratra sy NT3000 andian-dahatsoratra, ary misy ny telo-polo karazana fitsapana mijoro amin'ny feno karazana sy habe , izay afaka hihaona isan-karazany ny mpampiasa 'fitakian'ny ho fitaovana. Ny dingana famokarana dia mandroso. Ny teknika dia laharana ny mpitarika iraisam-pirenena ambaratonga.
Ny orinasa ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny fahaiza-manao manan-karena sy ny fitiliana dia tanteraka fepetra. Taian Nantai andrana Equipment Co., Ltd. manana henjana fitantanana anatiny, ary efa nametraka feno sy azo antoka tsara ny rafitra fanomezan-toky. Ny orinasa fivarotana vokatra Network efa niely nanerana ny firenena. Ny taorian'ny fanompoana-varotra ny vokatra dia manana ny rafitra azy manokana, izay afaka manome ny tsara indrindra ho an'ny mpampiasa fanompoana ara-potoana. Ny orinasa tanjona dia "manao ny marina sy mendri-pitokisana sy brazing fandidiana lalana vaovao eo amin'ny siansa sy ny teknolojia".
TAIAN NANTAI fanandramana FITAOVANA CO., LTD.
Miorina ao TIANYUAN STREET
no mitarika mpanamboatra manokana amin'ny famokarana dia ny mitarika mpanamboatra manokana amin'ny famokarana dia ny mitarika mpanamboatra manokana amin'ny famokarana dia ny mitarika mpanamboatra manokana amin'ny famokarana